यी हुन् ९० को दशकका ५ सफल अभिनेत्री, जो अझै छन् हट एण्ड क्युट - Gokarna News
यी हुन् ९० को दशकका ५ सफल अभिनेत्री, जो अझै छन् हट एण्ड क्युट
सोमबार, पुष ३०, २०७५ by Gokarna News
एजेन्सी– ९० को दशक बलिउड उद्योगका लागि निकै खास रह्यो । यही समयबाट बलिउडमा पारम्पारिक फिल्म निर्माण शैली परिवर्तन भयो । यो समय बलिउडमा कयौं यस्ता अभिनेता अभिनेत्री भित्रिए । जसले दर्शकका लागि नयाँ फ्लेवरको स्वाद दिए । यो समय भित्रिएका कलाकारमध्ये केही सफताको उचाईमा पुग्न समेत सफल देखिए ।
तीमध्ये केही त अहिले पनि बलिउडमा राज गर्न सफल छन् । सो समयका केही अभिनेत्रीको चर्चा आज यहाँ गर्न खोजिएको छ । जो सुन्दरताका कारण आज पनि करोडौको दिलमा राज गर्न सफल छन् ।
‘तु चीज बडि है मस्त मस्त’ गीतमा समेत डान्स गरेकी अभिनेत्री रविनाका ९० दशकमा आएका धेरै बलिउड फिल्म हिट छन् । यो समय अक्षयकुमार, गोविन्दा, सुनिल सेट्टी, अजय देवगन जस्ता अभिनेतासँग उनको सो समय जोडी निकै जमेको थियो । उनले सन् १९९१ मा निर्माण भएको फिल्म ‘पत्थर के फूल’ बाट अभिनयमा डेब्यु गरेकी थिइन् ।
करिब १०० फिल्ममा काम गरेकी उनी पछिल्लो समय फिल्मी दुनियाँ भन्दा टाढा रहेकी छन् । उनी अहिले निकै सुन्दर देखिन्छिन् ।
करिश्मा बलिउडकी सबैभन्दा सुन्दर अभिनेत्री मध्यकी एक हुन् । १९९२ मा निर्माण भएको फिल्म ‘प्रेम कैदी’ बाट उनले फिल्मी करियर सुरु गरेकी थिइन् । अभिनय करियरमा उनले एक राष्ट्रिय र ४ फिल्म फेयर पुरस्कार समेत हात पारेकी छन् । तर विवाहपछि उनी बलिउड फिल्म अभिनयबाट टाढा रहेकी छन् ।
पूर्व मिस इन्डिया तथा बलिउड अभिनेत्री जुहीले १९८६ मा फिल्म अभिनय डेब्यु गरेकी हुन् । तर १९८८ मा आएको फिल्म ‘कयामत से कयामत तक’ बाट भने उनी हिट अभिनेत्री बनिन् । उनले बलिउडमा कयौ हिट फिल्म दिएकी छन् ।
कजोलले पनि ९० दशकमै फिल्म यात्रा सुरु गरेकी हुन् । उनको पहिलो फिल्म ‘बाजिगर’ हो । फिल्ममा काजोल अभिनेता शाहरुखको जोडी बनेकी थिइन् । उनको यो फिल्मले सो समय बलिउडमा रहेको केही रेकर्ड समेत ब्रेक गरेको थियो । काजोलको अहिलेसम्म कुनै फिल्म फ्लप भएको छैन ।
९० दशककी धक धक गर्ल माधुरी बलिउडकी सबैभन्दा सफल अभिनेत्री हुन् । १९८४ मा बनेको फिल्म ‘अवोध’ बाट उनले अभिनय करियर सुरुवात गरेकी हुन् । अभिनेत्री माधुरी हिट भने अनिलकपुरसँग अभिनय गरेको फिल्म ‘तेजाव’बाट भएकी थिइन् । उनको सौन्दर्यताका अगाडि अहिले पनि धेरै अभिनेत्री फिक्का देखिन्छन् ।
सहमतिपछि खुल्यो चाबहिल–साँखु सडक
समता अस्पताल घटनाको छानबिन माग गर्नेमाथि प्रहरीले गर्यो लाठीचार्ज (फोटोफिचर)
बौद्धनाथ क्षेत्र विकास कोषबाट हटाउन ठुलो गिरोह लाग्यो :पूर्व अध्यक्ष लामा
आरोप प्रत्यारोपमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’: गलबन्दी चोरीको आरोप लगाउने राईमाथि नै चोरीको आरोप !
‘क्लिनफिड’को बिषयमा के भन्छन् नेपाली कलाकार ?
हङकङमा हलचल मच्चाउने तयारीमा ज्योति मगर !
टाइगर श्राफ र दिशा पटानीको ब्रेकअप !
ब्राजिलका स्टार खेलाडी नेयमार बार्सिलोना फर्किने पक्कापक्की
बढी मोबाइल चलाउँदा खप्परमा पलाउँदैछ ‘सिङ’
नेकपा अध्यक्ष दाहालको खुलासा –“विप्लवले मेरो दिमाग नै खल्बलिने कुरा गरे”
कञ्चनपुरमा मन्त्री मगरलाई कालो झण्डा देखाइयो, झडपमा दुई जना घाइते
साइप्रस शृङ्खलाबद्ध हत्याः नेपाली महिलासहित सात जनाको हत्या गर्ने पूर्वसैनिकलाई ‘सातवटा जन्मकैद’
स्वास्थ्यमन्त्री यादवले भने– “आगामी बर्षभित्र सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना भइसक्छ”